We went to Bloomington Farmers' Market today. We bought some locally grown vegetables including bitter gourd and water spinach fromaTaiwanese vendor.
In addition to locally grown produce, there is entertainment. We also enjoyed some music.
From: News Eleven.
First Burmese Baptist Church in Mawlamyine (Moulmein), Mon State, was founded by American Baptist missionary Adoniram Judson in 1827. It was built inacombination of Western and Mon architectures using local materials. It will be renovated soon.
.... မော်လမြိုင်အသင်းတော်ကို အမေရိကန် သာသနာ့အမှုဆောင် ဆရာယုဒသန်က ၁၈၂၇ ခုနှစ်တွင် စတင်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီး၊ အဆောက်အအုံပုံစံ သည် ဒေသထွက် သယံဇာတများကို အသုံးပြုလျက် အနောက်တိုင်း လက်ရာနှင့် မွန်ယဉ်ကျေးမှုရိုးရာ ဗိသုကာ လက်ရာတို့ကို ပညာသားပါစွာ ပေါင်းစပ် တည်ဆောက်ထားကြောင်း၊ WMF ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံမှ ပညာရှင်များနှင့်အတူ ပူးပေါင်း ထိန်းသိမ်းဆောင်ရွက် သွားမည်ဖြစ်ပြီး .....
Credit to Zaw Htike:
ရွာတစ်ရွာတွင် သူကြီး လုပ်သူက လူတွေကို မျက်စိကန်းအောင် လုပ်ထားလိုက်သည်။ နှစ်ပေါင်း များစွာ ကြာလာတော့ လူတွေကအမှောင်နဲ့ အသားကျလာသည်။ အလင်းရှိတယ် ဆိုတာကို မသိတော့။ တစ်ခုခု ဆို သူကြီး က ပြောပြရသည်။ “ဟိုဘက်ရွာမယ် စားစရာမရှိလို့ လူတွေသေကြသကွ။ ငါတို့ရွာမှာ ဆန်ပြုပ်လေးပုံမှန် တစ်ရက် တစ်ခေါက် သောက်နိုင်တာ ငါ့ကျေးဇူးကွ။” လူတွေက ယုံကြသည်။ ဟိုဘက်ရွာမှာ ကားဆိုတာကြီး ရှိတယ်ကြားတော့ သူကြီးက “ကား ဆိုတာကြီးက စီးလို့ တိုက်ရင် သေတတ်တယ်ကွ။ မစီးကြနဲ့။ လမ်းလျှောက်ကြ။ အန္တရယ်ကင်းတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တယ်။” လူတွေက ကားမစီးပဲ လမ်းလျှောက်ကြသည်။ ကားစီးတဲ့ လူတွေကို ငတုံးတွေလို့ ထင်သည်။
အဲ့ဒီမှာ တစ်ခြားရွာ သွားနေပီး ပြန်လာတဲ့ အဘွားအို တစ်ယောက်က ရွာသားတွေ ဒီလိုအကန်းဘဝ နဲ့ နေနေရတာကို မကြည့်ရက်။ မျက်စိပြန်မြင်အောင် လုပ်ပေးလိုက်သည်။ အဲ့ဒီ ပြန်မြင်လာတဲ့ လူတွေကို သူကြီးကပြောသည်။ “ကဲ ကြည့်စမ်း မျက်စိကန်းနေတုန်းက နေ့ရယ် ညရယ် မခွဲဘူး သွားချင်သလိုသွား လာချင်သလိုလာ လို့ရတယ်။ နင်လို့ မျက်စိမြင်ရမှပဲ ညဆို မသွားတက်တော့ဘူး။ မြင်လာရတော့ ဘယ်သူက လှတယ်၊ ဘယ်သူကရုပ်ဆိုးတယ် ဆိုပီး တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မနာလို…